Mohamed Salah oo Kooxda Liverpool ku wargeliyey Mushaharka uu ka doonayo haddii uu heshiiska u kordhinayo – Gool FM
Mohamed Salah oo Kooxda Liverpool ku wargeliyey Mushaharka uu ka doonayo haddii uu heshiiska u kordhinayo
(Liverpool) 05 Sebt 2021. Mohamed Salah ayaa la soo warinayaa inuu ku wargeliyey Kooxdiisa Liverpool in jeebka loogu shubo mushahar dhan 500 oo kun oo gini isbuucii, si uu u saxiixo heshiis cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Anfield.
29-sano jirkaan ayaa dhaliyey 127 gool, isla markaana loo diiwaan geliyey 49 caawin 206 kulan oo uu u saftay Kooxda Liverpool tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay Naadiga Roma bishii July ee sanadkii 2017-kii.
Salah ayaa qandaraaskiisa haatan ee garoonka Anfield waxa uu ku eg yahay bisha June ee sanadka 2023-ka, waxaana shaki la geliyey mustaqbalkiisa kooxda Jurgen Klopp, iyadoo la soo warinayo inuu xiiso ka helayo dalka Spain.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in xiddiga xulka qaranka Masaru u u sheegay Kooxda Reds inuu ka doonayo mushahar dhan qiyaastii 200 oo kun oo gini illaa 500 oo kun oo gini todobaadkii haddii uu u saxiixayo qandaraas cusub.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaa ku daraysa in Salah ay u badan tahay inuu hoos u dhigi doono dalabkiisa si uu qalinka ugu duugo qandaraaska cusub, maadaama Liverpool aysan diyaar u ahayn inay bixiso mushaharka intaa la eg.
Xiddiga xulka qaranka Masar ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku jira heerka kooxeed xilli ciyaareedkan, isagoo labo jeer shabaqa soo taabtay saddex kulan oo uu u saftay Liverpool, waxaana u sii dheer inuu caawiye ka ahaa labo gool oo kale.
Macallin Solskjaer oo u sheegay Xiddigihiisa Man United inay ka fiican yihiin Kooxdii Ferguson ee 1999-kii Saddexleeyda Koobabka ah ku guuleysatay!